International Hotel Projects - Armati Ihhotela Project In China
Armati Hotel Project In China
UMsombuluko, February 1, 2016 9: 21: 19 AM America / Los_Angeles
Enye yezinto Armati 5 ukuqala hotel project e China, Eshiya, wamukelekile ukuba vakashela leli hhotela ukubona isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu yethu.
Armati 447 uchungechunge isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu catalouge sicela uhlole okulandelayo:
Beka endaweni esivelele Changsha, Changsha Vaya International Hotel ubeka into lomuzi kumele banikele ngaphandle nje qathatha yakho. izici Impahla anhlobonhlobo izakhiwo ukuze wenze ukuhlala kwakho ejabulisayo. Basebenzise yehhotela-hora 24 ekamelweni service, igumbi service, igumbi umndeni, car park, izindawo izivakashi abakhubazekile. Guestrooms zifakwa nazo zonke Izinsiza wena kudingeka ukuze nje bakwazi ukulala kahle ebusuku. Kwezinye emakamelweni, izivakashi bangathola ithelevishini, ukufinyelela internet - LAN (yokuthopha), non ukubhema amakamelo, ukufinyelela internet - wireless, eshaweni. Ukuze uthuthukise ukuhlala izivakashi ', ihhotela linikeza izindawo zokungcebeleka ezifana igalofu (esizeni), sauna, massage, spa, pool zasendlini. Abasebenzi Friendly, izikhungo ezinkulu futhi isondelene nakho konke Changsha kufanele anikele izizathu ezintathu ezinkulu kufanele uhlale at Changsha Vaya International Hotel